China Rhinestone lapel pin ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Iphinikhodi yelapel yenkanyezi ikhiqize izigidi zamaphinikhodi futhi yamukelwe kahle amakhasimende amaningi, okwenza iphinikhodi yakho yelapel yetshe eliyigugu/i-Rhinestone iphelele njengobucwebe!
Senza lula inqubo yokwenza ngokwezifiso izikhonkwane ze-lapel ukuze amakhasimende akwazi ukwenza ngendlela oyifisayo amaphinikhodi. Isinyathelo sokuqala ukuthi uxhumane nathi ukuze uqale ukwenza izikhonkwane zakho ze-lapel ze-Rhinestone!
Kungani kufakwe izikhonkwane?Ngoba ayikho into efana nama-rhinestones ukuze uthole iphinikhodi yakho yangokwezifiso noma i-brooch edizayinelwe ukukunikeza ukubukeka okuhle nokumangalisayo okudingayo.I-PinMart ingomunye wabakhiqizi abambalwa bephini le-lapel abakwazi ukwenza ngendlela oyifisayo izikhonkwane zama-rhinestone, ama-brooches nezinye izinsimbi.
Sinikeza imibala yamatshe engaphezu kweshumi nambili ngobukhulu obuhlukahlukene, kanye nezinsiza eziningi nezinketho zokukusiza kangcono ukwenza ngokwezifiso izinaliti zakho ze-Rhinestone ukuze uhlangabezane nezidingo zakho eziqondile.
I-PinMart ibe nenhlanhla yokusebenza namanye amabhrendi amakhulu kakhulu kwezemfashini, amakilabhu abalandeli namakhasimende ezinkampani ukwenza amanye amaphinikhodi nama-brooches e-Rhinestone amangalisayo.
Lena imikhiqizo yekhwalithi enhle kakhulu futhi ethengekayo, engatholakali kwenye indawo.
Ingabe izikhonkwane ze-rhinestone ezenziwe ngokwezifiso zihambisana nomklamo wami?
Singakwazi ukwenza ngokwezifiso izikhonkwane ze-lapel zama-rhinestone ngezitayela ezihlukahlukene, kodwa imvelo yempahla isho ukuthi umklamo oyinkimbinkimbi ungase ungabi yisinqumo esingcono kakhulu sezikhonkwane ezinjalo.
Kunemibala eminingi ehlukahlukene yekristalu nosayizi ongakhetha kukho, nokho, singakha izikhonkwane nama-brooches amangalisayo ngokubukeka okumangalisayo ongase ungakulindeli.
Inqubo yokwenza izikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso ze-rhinestone zisho ukuthi isikhathi sokukhiqiza esijwayelekile ngemva kokugunyazwa kwesampula singamaviki angu-5-8.Ngenxa yobunzima balezi zinqubo zokukhiqiza, sidinga inani elincane le-oda lezingcezu ezingu-500. Uma usidinga ukuze senze imininingwane ukunikeza, omunye wabamele isevisi yamakhasimende ethu uzoxhumana nawe phakathi nosuku lokusebenza.Xoxa ngemibono yakho nochwepheshe bethu be-PIN yangokwezifiso!
Okwedlule: iphinikhodi eqoshiwe
Olandelayo: Iphinikhodi ye-3D Lapel
Izikhonkwane ze-Lapel ze-Rhinestone
Iphinikhodi ye-enameln eqinile
Iphinikhodi yokuphrinta yedijithali